Computer Science | WWW.DARARWEYNE.TK
Casharka 3-aad ee barashada luuqada HTMLKA
Filed under: Bogga Hore, Computer Science, HTML — Leave a comment
Insha’allahu tacaalaa waxaynu ku dhigan doonaa casharkeena 3-aad waxyaabo asaasi u ah HTMLka, idin siiyo tusaalooyin farabadan oo kamida Luuqadda HTML-ka
HTML Heading waxa uu dhaxeeyaa <h1> ilaa <h6>, midba midka uu ka sarreeyo ayuu qoraal ahaanna uga waynyahay, tusaale ahaa <h1> ayaa ugu wayn marka aynu ka hadleyno cinwaanka, waxaana ugu yar <h1>
HTML Paragraph waxa uu kuu sahlayaa in aad farta aad habayso oo aad sadar ukala samaysid amarka la isticmaalayaana waa <p> waxaana lagu soo xidhayaa </p>, qoraalka udhexeeya intaas ayuu linemo isku xiga usamaynayaa oo aanu kala dagayn
Tusaale ahaan sidan ku taalla Sawirka bal ila eega
Barashada HTML-ka (casharka 2-aad)
Inshallah tacaallaa waxaynu sharraxi doonaa sida aad usamayn lahayd page kudhisan luuqadda HTML
Waxaad soo kicineysaa Notepad, adigoo katagaya programs>>accecories>>notepad
Marka uu kuu soo baxo notepad waxaad ku qoreysaa code-ka noocan ah
<title> Welcome To My first webpage </title>
Markaad intan code ah aad qortid waxaa browserka kasoo bixi doona this is my first webpage oo ku dhex qoran body tag dhexdiisa
Marka aad intaa ku qortid notepad, waad save garayneysaa, waxaad ku save garayneysaa tusaale ahan sidan oo Mainpage.htm/html.
Haddaan sii sharraxo qaybtani waa qaybta ugu muhiimsan waayo haddii aanad ku save garayn code aad qortey .html uma aqoonsanayo code-ka in uu yahay html waxa uu moodayaa qoraal caadiya debeeto wax saameyn ah kuma samaynayo laakiin haddii aad ku save garayso magac.html waxa uu ogaanayaa Browser-ku in uu yahay html code.
halkan ka eeg sida loogu qorayo Notepad HTML code, waxaad kasoo ka eegtaa sida loo save gareenayo
Barashada HTML-ka (casharka 1-aad)
HTML-ku waa maxay?
Kalmadda HTML waxay ka taagantahay kalmadan ah (HyperText Markup Language), HTML waa luuqad loogu talagay in lagu design gareeyo Webpages
HTML-ku maaha luuqad lagu samayn karo barnaamij ama software sida JAVA, VB.NET iyo C++, waa luuqad fudud oo muddo gaaban lagu baran karo, badanaa mawadato code faro badan umana baahna compiler software.
HTML waxa uu leeyahay <TAGS>, tags waxay leeyihiin meel ey ka bilowdaan iyo meel ey kudhamaadaan tusaale ahaan sidan oo kale
HTML qaybihiisa ugu waaweyniba waa inta sawirka ka muuqata oo kala ah
1. HTML tag – waxa uu kuu samaynayaa html tag page kusoo kacaya luuqadda HTML-ka.
2. HEAD tag – waa qayb kamida HTML-ka waana qaybta sare ee header.
3. TITLE tag – waxa uu hoos tagaa HEAD waana qaybta loogu talagalay cinwaanka uu yeelan doono page-kaagu.
4. BODY tag – waxa uu hoos tagaa HTML-ka waana qaybta lagu qoro code ugu farabadan ee uu yeelan doono page-kaagu.
sidaad kaspersky free uga dhigi lahayd
Filed under: Bogga Hore, Computer Science — Leave a comment
Walaaladeyda sharafta leh maanta waxaynu soo gunaanadeynaa mushkiladii inaga haysatey sida aad u heli lahayd antivirus Free ah oo aan lacag lagu weydiineyn.
Sidaa daraadeed waxaanu maanta helney barnaamij layidhaahdo Kasparsky antivirus, hawshuna wey iska fududahay.
Sideynu ognahay shirkada kasparsky waxay bixisaa mudda 30-cisho ah oo free ah oo tijaabo ah, waxaa arrin lalayaabo ah in eynu 30-kaa cisho eynu kadhigano intaad nooshahay oo dhan waxaanad umaraysaa markasta oo ey soo dhawaato in ey kadhamaato 30-ka cisho ayaad dib ucusbowneysiineysaa oo soddonkii dib ugu celinaa tusaale ahaan waxaa kaaga hadhey muddadii aad isticmaali lahayd hal maalin oo qudha waxaad kusoo cesheneysaa 30 saasaanad uwadaysaa 30-kaa cisho madhamaadaan.
Marka hore:- waxaynu tala saaraneynaa alle in uu hawshaa inugu guuleeyo
Sidaad ka aragtaanba sawirkan aniga waxaa iiga hadhey muddada isticmaalka barnaamijkan 25 cisho waxaana rabaa in aan ku ceshto 30-kii cisho.
Network – Lesson (1)
Filed under: Computer Science — 3 Comments
Computer network horta wax lacuna maaha ee waa cilmi kamida computer science, science markeynu leenahay hamoodin in eynu kahadleyno biology, physics iyo chemistry ee computer science waxa weeye waa cilmiga barashada computer-ka iyo technologyiyada
Badanaa computer network waxaa loo soo gaabsadaa kalmada Network oo qudha, haddaba network waa maxay?
Network waa isku xidhka laba computer, saddex computer iyo inkabadanba, kudarsoo la isku xidhi mayo computers oo qudha ee waxaa kujira qalabyo kale sida (hub-switch-router) iyo wixii la halmaala, faaiida kujirtaana waxa weeyesi si ey wadaagaan files iyo data kadhaxeysa
sida ay iskugu xidhanyihiin labadan computer bal ila eega
two computers connected together
laba computer wixii kabadan sida la iskugu xidhaana waa sidatan
more computer and devices that are connected together
Naadiga RealMadrid oo gaashaan ku dhuftey iibsashada Karim Benzema
Wargeyska kasoo baxa dalka Talyaaniga ee lagu magacaabo “La Gazzette Delle Sport” in naadiga juventus oo kadhisan dalka italy dooneyso ciyaartoyga reer RealMadrid”Karim Benzema” kuna dooneyso lacag gaadheysa 30 million oo euro ah.
laakiin naadiga realmadrid kamay yeelin oo gaashaanka ayey ku dhufatey dalabkaa ugu yimid naadiga juventus
Filed under: Computer Science — Leave a comment
Filed under: Computer Science — 1 Comment
Network - Lesson (1)
Daaficii Hore Ee Kooxda Liverpool Djimi Traore Oo Ku Biirey Kooxda Marseille